Kulamo iska soo horjeeda oo kasocda Gaalkacyo & Wararkii u dambeeyey.
GAALKACYO(P-TIMES) – Wasiiradda Puntland ee kasoo jeeda gobalka Mudug ayaa saacadihii u dambeeyey waday dadaal xoog badan oo ku wajahan sidii ay iskugu keeni lahaayeen waxgaradka gobalkaas, una qaban lahaayeen kulan lagu soo taageerayo howlaha ay wado Xukuumaddu, waxaana dadaalkan garab socday dad badan oo kasoo horjeeda.
Wasiiradda ayaa ku guuleystay in ay xalay qeybiyaan ku dhawaad 100 waraaqadood oo casumaad ah, isla markaasna ay ku doonayaan in ay Odayaasha dhaqanku yimaadaan kulankooda, waxana xoguhu sheegayaan in aysan wali jirin hubanti dhameystiran.
Nabadoonada Mudug, qaarkood ayaa diiday dalabka dawladda Puntland, waxayna sheegeen in aysan garan karin sabab waqtigan keentay in laga hadlo arrimahan oo ay xooga saarayaan sidii taabagal looga dhigi lahaa qorshaha socda.
Warar hoose waxay kaloo cadeynayaan in ay jiraan isku dayo ay wadaan odayaasha qaarkood oo ay doonayaan in ay ku qabtaan kulan, kaas looga soo horjeedo oo ka dhaca magaalada Gaalkacyo.
PUNTLANDTIMES, waxay ogaatay in ay Odayaasha badankooda doonayaan in la qabto kulanka dawladda oo aysan waqtigan waxba dhib ah u arkin Xukuumadda Deni, balse ay ka hadli doonaan mashaariicda horumarineed ee ay baahida weyn u qabaan.
Maalmo kahor, wasiiraddu wey ku guuldareysteen in xal rasmi ah laga gaaro arrimahan, waxayna dadaal galiyeen sidii meelmar looga dhigi lahaa qorshaha dawladda ee qabashada kulamadan, waxayna bilaabeen in ay lacago u adeegsadaan sidii Odayaashan lays kugu keeni lahaa.
Non sense reer Mudud waa Cali Ibraahim iyo in lagu qurxiyay iyana warkooda way cadeeyeen dowlada Puntland way taageereen.